vivo Y20s丨vivo Myanmar
မျက်လုံးကာကွယ်ခြင်းစနစ်နှင့် ၆.၅၁ လက်မအရွယ် Halo FullView Display
၆.၅၁ လက်မအရွယ် Halo FullView Display သည် ၂၀: ၉ နှင့် HD + (၁၆၀၀ x ၇၂၀) resolution ဖြင့် မျက်နှာပြင်အကျယ်ဖြစ်သည်။ မြင်ကွင်းသည် ပိုမိုကြီးမားပြီး စွဲလမ်းဖွယ်ရာဖြစ်ကာ In-Cell နည်းပညာနှင့်အတူ ထိုမျက်နှာပြင်သည် ပို၍ အရောင်တောက်ပသည်။ ဒါဟာကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ အသေးစိတ်နှင့်အတူ ကွဲထွက်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး ဂိမ်းနှင့်ဗီဒီယိုများအတွက်စံပြလည်းဖြစ်သည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသော Eye Protection Mode သည် ဘေးဖြစ်စေသော အပြာရောင်အလင်းတန်းများကို စစ်ထုတ်ပေးပြီး သင့်ရဲ့အမြင်အာရုံကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
2.5D တောက်ပလင်းလက်သော အရောင်များ
အပြည့်အဝ ပွတ်တိုက်ပုံသွင်းထားသော 2.5D ကိုယ်ထည်သည် ပေ့ါပါးပြီး၊ အရောင်သစ်များသည် လက်ထဲတွင် ကိုင်ဆောင်ထားရသည့် ခံစားမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
နက်ရှိုင်းသော သမုဒ္ဒရာမှ လှုံ့ဆော်ပေးသော ဤအရောင်သည် ခိုင်မာသန့်စင်ကာ အလင်း၊ အမှောင်ကို ချိတ်ဆပေးထားသည်။ ၎င်းသည် စတိုင်ကျသည့် နည်းပညာမြင့်မားမှုနှင့် နူးညံ့သော လေပြေလေညှင်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ခံစားမှုမျိုးကို ရစေသည်။
နက်ရှိုင်းသော စကြဝဠာကို ပုံစံကို မှီငြမ်းဖန်တီးထားသည့် အပြာရောင်နှင့် ခရမ်းရောင်သည် ထူးခြားသော မသိခြင်းများ၏ စိတ်ကူးယဉ်မှုများကို ပွင့်ဟသွားစေသည်။
ဘေးဘက်လက်ဗွေစနစ် Side-Mounted Fingerprint Scanner
Side-Mounted Fingerprint Scanner ဖြင့် သင်၏ဖုန်းကို ဝ.၂၂ စက္ကန့်အတွင်း ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဤသွက်လက်ပါးနပ်သော ဒီဇိုင်းသစ်သည် သင်၏နေ့စဉ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုနှင့်လိုက်ဖက်ညီစေသည်၊ ချက်ချင်းဆိုသလို ဖွင့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် Face Wake နည်းပညာသည် သင်၏ဖုန်းကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဖုန်းလော့ခ်ဖွင့်နိုင်သည့် ရွေးချယ်စရာတခြားတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
*မော်ဒယ်အားလုံးသည် Side Fingerprint နှင့် Face Access ကို အထောက်အကူပြုသည်။ *ဝ.၂၂ စက္ကန့်သည် ဘေးဘက်လက်ဗွေစနစ်ဖြင့် ဖွင့်ရသည့် ကြာချိန်ဖြစ်ပြီး ဖွင့်ချိန်သည် ဝ.၂၂ စက္ကန့် ဖြစ်ကာ မျက်နှာပြင်ပိတ်ချိန်သည် ဝ.၃၇ စက္ကန့် ကြာမြင့်သည်။ အမှန်တကယ် စွမ်းဆောင်ရည်သည် အမှန်တကယ် ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
Qualcomm Snapdragon Processor + 4GB RAM
Qualcomm Snapdragon ပရိုဆက်ဆာနှင့် 4GB + 128GB သိုလှောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် Y20s သည် မတူညီသော ဂိမ်းများကို အလွယ်တကူ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံများအတွက် အက်ပလီကေးရှင်းများကို ထည့်သွင်းတပ်ဆပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသေးသည်။ triple card slot သည် 256GB အထိ သိုလှောင်နိုင်မှုကို အထောက်အပံ့ပေးသောကြောင့် သင့်အကြိုက် ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ သီချင်းတွေအတွက်လည်း အံ့ကိုက်ပါပဲ။
*256GB အထိ သိုလှောင်နိုင်မှုကို ထောက်ပံ့ပါသည်။ Micro SD ကဒ်ကို သီးခြားဝယ်ယူရန်လိုသည်။
*အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သော RAM / ROM သည် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော အပ်များနှင့် operating system ၏ သိုလှောင်မှုတို့ကြောင့် အနည်းငယ် လျော့နေနိုင်ပါသည်။
18W FlashCharge နည်းပညာဖြင့် ၆၉ မိနစ်အတွင်း 5000 mAh (TYP) ဘက်ထရီ၏ ၇၀% အထိ အားဖြည့်လိုက်ပါ။ အခုဆို အလွယ်တကူအားသွင်းနိုင်ပြီး ဘက်ထရီအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အနောက်မှာ ထားခဲ့နိုင်ပါပြီ။ AI စွမ်းအင်ချွေတာသည့် နည်းပညာနဲ့အတူ တစ်ကြိမ်အားအပြည့်သွင်းထားမယ်ဆို ၁၆ နာရီကြာ အွန်လိုင်း HD ရုပ်ရှင်လွှင့်ခြင်း (သို့) ၁၁ နာရီကြာသော ဂိမ်းအကြီးများကို ဆော့နိုင်မှာပါ။ Reverse Charging ကလည်း သင်အပြင်မှာရှိနေရင်တောင် သင့်ရဲ့ အခြားပစ္စည်းတွေကိုပါ အားပြည့်နေစေမှာပါ။
*Reverse charging အား သီးခြားဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည့် OTG cable လိုအပ်သည်။
*အားသွင်းရန်အချက်အလက်များသည် vivo ဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများအပေါ် အခြေခံသည်။ စမ်းသပ်ပတ်ဝန်းကျင်: အပူချိန် 25 ℃± 1 ℃; စမ်းသပ်မှုအခြေအနေ - vivo တရားဝင်ပုံမှန်အားသွင်းစက်ကို မျက်နှာပြင်ပိတ်ပြီး ဘက်ထရီစွမ်းရည်၏ ၁% ကို အသုံးပြု၍ အားသွင်းပါ။ အမှန်တကယ်အားသွင်းနှုန်းသည် အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အခြားအချက်များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
*Y20s တွင် vivo standard charger (FlashCharge adapter 9V / 2A) တပ်ဆင်ထားပြီး 18W အထိ ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပြောင်းအလဲနှင့် အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုသည် ချိန်ညှိပေးသည်။
*ပုံမှန်ဘက်ထရီပမာဏမှာ 5000 mAh ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော ဘက်ထရီမှာ 4910 mAh ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက် - Dual-Engine Fast Charging ကို Y20s များတွင်သာ ရနိုင်သည်။ Reverse Charging ကိုမူ မော်ဒယ်အားလုံးတွင် ရနိုင်ပါသည်။
Y20s ၏ AI Triple Macro Camera ကို Face Beauty, Portrait Light Effects နှင့် Filters များအပါအဝင် အင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ သင့်ရှေ့မှောက်တွင်ပင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် အရာအားလုံးကို master shots များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်ရှုထောင့်များကို ချောမွေ့စွာပြောင်းနိုင်သည်။ အဓိက 13MP အနောက်ကင်မရာ၊f/ 2.2 ကြီးမားသော aperture နှင့် PDAF နည်းပညာတို့ဖြင့် အသေးစိတ်ကျမှုများက ပိုမို သက်ဝင်တောက်ပစေပါသည်။
2MP Bokeh ကင်မရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသစ်ဖြစ်သော bokeh algorithm ကြောင့် တိကျပြီး အသေးစိတ်ကျလွန်းသော ရလဒ်များကို ရရှိစေပါသည်။ အခုဆိုရင် portrait ပုံများသည် ပို၍ သက်ဝင်လာကာ ပိုကောင်းသည့် တိကျလှပမှုများနှင့်အတူ မဂ္ဂဇင်းကာဗာဓာတ်ပုံများသဖွယ်ပင် ဖြစ်နေတော့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့် Multi-Turbo 3.0 တွင် စနစ်၏ အခြေခံအဆင့်တွင် အလုပ်လုပ်နေသော Center Turbo နှင့် စနစ်မမှန်မှုများ (မကြာခဏ တတိယပါတီ အက်ပလီကေးရှင်းများကြောင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော)ကို မဖြစ်မှီကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းခြင်းပြုလုပ်သော AI Turbo တို့ပါဝင်သည်။ ပိုကောင်းသော ကွန်ယက်စွမ်းဆောင်ရည်မှသည်လျင်မြန်စွာအအေးပေးခြင်း၊ AI လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ဂိမ်းကစားခြင်းအထိ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသည် ယခင်ကထက် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။
Ultra Game Mode သည် အခုဆိုရင် Esports Mode ကိုပြသပေးပြီး နေ့စဉ်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် pro စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ပြင်းထန်မှုတွေကို ဆောင်ကျဉ်းပေးမှာပါ။
4D Game Vibration 2.0 သည် သင့်ကို တကယ့် စစ်မြေပြင်ထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Pop-up window optimization ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင့်အောင်ပွဲတွေကိုသာ အာရုံစိုက်နိုင်အောင် သတိပေးချက်တွေ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကို အလိုအလျောက် ဖယ်ရှားပေးမှာပါ။
အသစ်ထည့်သွင်းထားသည့် Game Album နှင့် Screen Recording လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလျှောဘာပေါ်ကို တစ်ချက်ထိရုံဖြင့် ဖွင့်နိုင်သည်။ သင့်၏ မျက်နှာပြင်မှတ်တမ်းအားလုံးသည် Game Album ထဲသို့ အလိုလျောက် သိမ်းဆည်းပေးထားမည်ဖြစ်သည်။
Smart Game Countdown လုပ်ဆောင်ချက်သည် သင်၏ avatar ပြန်လည်အသက်မဝင်ခင် ကျန်ရှိနေချိန်ကို စောင့်ကြည့်ပေးသည်။ လူမှုမီဒီယာအသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်အခြားအရာများကို ပြုလုပ်သည့်အတွက်လည်း လုပ်ဆောင်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ floating window တစ်ခုသည် countdown ကိုပြသပြီး ၎င်းကိုရပ်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် tap တစ်ခုတည်းက သင့်အားလုပ်ဆောင်ချက်ထဲ၌ သင့်ကိုပြန်ခေါ်ပေးလိမ့်မည်။
*FOS 10.5 ဖြင့်မော်ဒယ်အားလုံးတွင်ရနိုင်သည်။
ဆန်းပြားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုများအတွက် Dynamic Effects
Settings ထဲရှိ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုက screen animation များကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာ များစွာကိုပေးသည်။ သင်၏ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ခြင်း၊ သင်၏မျက်နှာကိုမှတ်မိခြင်းနှင့် အခြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများစွာပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
EasyShare၊ ချက်ချင်းရှဲသုံး သင့်ဖုန်းကလုံး
ဖုန်းအသစ်ထဲကို ဒေတာတွေ ရွေ့ပြောင်းရတာအတွက်နဲ့တော့ ဒုက္ခအဖြစ်မခံပါနဲ့။ EasyShare က တစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ရိုးရှင်းစွာပဲ အမြန်ဆန်ဆုံး ကူးပြောင်းပေးမှာပါ။ ပြောင်းလဲချိန်တန်တာကတော့ အခုပါပဲ။
iManager, သင့်ဖုန်းအတွက် စီစဉ်သူ
အသေးစိတ်ကျသော iManager သည် vivo အသုံးပြုသူများကို ပျင်းစရာကောင်းသောနေ့စဉ်အလုပ်များမှ လွတ်မြောက်စေသည်။ သင်၏ဖုန်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ညအချိန်တွင်ပြဿနာများကိုစစ်ဆေးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဂရုတစိုက် လုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။ ညအိပ်အနားယူချိန်၌ iManager သင်၏ဖုန်းကို ကောင်းမွန်းတဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေစေမည် ဖြစ်သည်။
2. ယခု ပါဝင်သော ပုံသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပြီး display screen ပေါ်တွင် ပြထားသည့် ဓာတ်ပုံသည် ပုံဖော်ပြသရန် ရည်ရွယ်၍ ကိုယ်တိုင် တီထွင်ထားသည့် ဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ စံထားရှိထားသည့် ပြင်ပဓာတ်ပုံများကို ရယူနိုင်ပါသ
5. ၅။ pixel တန်ဖိုးသည် မတူညီသောကင်မရာအသုံးအနှုန်းများအောက်တွင် ကွဲပြားနိုင်ပြီးအမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်သည်။
6. အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားချိန် - 4G ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု၊ 150cd / m²ဖန်သားပြင်တောက်ပမှုနှင့် 63dB (A) အသံအတိုးအကျယ်ရှိသည့် Y20s များသည် PUBG ကို ပုံမှန်ချိန်ညှိချက်များဖြင့် ၁၁ နာရီအထိ ဆက်တိုက်ကစားနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ဂိမ်းအချိန်သည် အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
7. အွန်လိုင်းဗီဒီယိုလွှင့်ထုတ်ချိန် - 4G ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု၊ 150cd / m²ဖန်သားပြင်တောက်ပမှုနှင့် 63dB (A) အသံအတိုးအကျယ်ရှိသော Y20s သည် YouTube ၌ ဗီဒီယိုများကို ၁၆ နာရီအထိ အဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ထုတ်လွှင့်သောအချိန်သည် သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။